Volavolan-tsoavaly sy ny firazanany solontena indrindra. Soavaly Noti
Drafitra soavaly dia ireo ampiasaina amin'ny asa noho ny fahaizany mamikitra. Araka ny fomban-drazana dia nampiasaina tamin'ny asa fambolena izy ireo, ho toy ny hery manosika ary ho toy ny soavaly soavaly amin'ny fotoana sasany mitaky milina mifindra.
Sambo soavaly, mitaky fikarakarana manokana sy famahanana kely kokoa arakaraka ny karazany sy ny habetsaky ny asa izay tanterahin'izy ireo isan'andro isan'andro.
Ny maro an'isa ny volavolan-tsoavaly volavolan-tsoavaly tsy nisy talohan'ny taonjato faha-XNUMX izy ireo. Tamin'ity taonjato ity no ny filàna ara-tafika sy ara-pambolena izay mamaritra ny hazakazaka andraikitra mavesatra. Ankoatry ny fitaoman'ny revolisiona indostrialy, ny fanatsarana ny kalesy sy ny milina fambolena.
ireo Ireo firenena nanana làlam-barotra dia nahita fa tena ilaina ireo. Na ireo toerana misy lakandrano ireo aza dia nampiasa azy ireo hampita ny herin'ny rano amin'ny tady tariby sy fitaovana mekanika.
Tany Espana dia tsy nisy soavaly soavaly mavesatra hatramin'ny taonjato faha-XNUMX.
1 Karazana soavaly volavolan-tsoavaly
1.1 Soavaly drafitra mavesatra
1.2 Soavaly mitaingina semi-mavesatra
1.3 Soavaly volavola maivana
2 Fampiasana nentin-tsoavaly soavaly nentim-paharazana
2.2 Fitaterana entana sy olona
2.3 Soavaly mandatsa
2.4 Fiara milina
2.5 Asa ala
3 Karazan-tsoavaly soavaly lehibe
3.1 Toetra mampiavaka ny karazana soavaly volavolan-tsoavaly
3.2 Soavaly Ardenes
3.3 Drafitra fanosotra amerikana
3.4 Soavaly italiana
3.6 Drafitra soavaly Belza
3.9 Soavaly breton
Karazana soavaly volavolan-tsoavaly
Afaka mahita isika karazana soavaly telo karazana arakaraka ny mampiavaka azy sy ny fampiasany, samy misy ifandraisany: soavaly mavesatra, soavaly mitaingina soavaly ary soavaly maivana.
Soavaly drafitra mavesatra
Izy ireo no lehibe indrindra amin'ny volon-tsoavaly nilanja hatramin'ny 180 cm tany amin'ny malazo. Izy ireo koa dia lehibe amin'ny habe, milanja 600kg ka hatramin'ny 1000kg. ny fohy ny rantsam-batana ary matanjaka ny taolana misy musculature mivoatra tsara. Ho fanampin'izay, matetika izy ireo dia manana toetra milamina tsara.
Ny karazan-doko mavesatra sasany dia: volon-dronono amerikana, soavaly Ardennes, soavaly Belza, soavaly Breton, Percheron, soavaly Shire, soavaly Bolognese na soavaly Catalan Pyrenean.
Soavaly mitaingina semi-mavesatra
Ireo volavolan-tsoavaly izay nampiasaina tamin'ny fitaterana toy ny stagecoache dia nitaky herinaratra haingana ihany koa. Izany no nahatonga ny soavaly soavaly mavesatra dia tsy nifanaraka tamin'ireny asa haingam-pandeha avo lenta ireny. Ireo soavaly mitaingina soavaly kely biby maivana kokoa izy ireo ka afaka mandroso eo amin'ny lalan-kaleha.
Ny sasany amin'ireo karazan-kazo mavesatra semi-mavesatra dia ny karazany maivana amin'ny Percheron ary ny karazany maivana amin'ny Breton, antsoina koa hoe soavaly Breton Postire, soavaly Ardenes.
Soavaly volavola maivana
Ireo no soavaly maivana indrindra amin'ireo soavaly volavolan-tsoavaly. Nanao asa toy ny mahazatra izy ireo mitaona kalesy maivana amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa noho ny roa teo aloha.
Hitantsika ao anatin'io sokajy io ny karazana toy ny: Morgan na Hackney.
Fampiasana nentin-tsoavaly soavaly nentim-paharazana
Soavaly volavolaina mavesatra no nampiasaina hiasa sy hamindra ireo milina fambolena isan-karazany mandra-panoloana ny soavaly sy ny ampondra amin'ny fandrosoana ara-teknolojia.
Fitaterana entana sy olona
Fantatra tsara fa nandritra ny fotoana samy hafa dia nentina tamin'ny kalesin-tsoavaly ny entam-barotra. Ireo kalesy ireo dia mety ho samy hafa endrika sy habe, izay samy nanana ny anarany na ny iray hafa: sarety, sarety, tartata, galley.
Azonao atao ny mahafantatra ireo karazan-kalesy samihafa natsoaky ny soavaly tao amin'ny lahatsoratray: Fiara fitondra soavaly: tantara, karazany ary fampiasa
Ho fanasongadinana dia hiresaka roa isika, ny iray ho ampiasaina lehibe ary ny faharoa ho liana amin'ny fahalianana:
Nandritra ny fotoana ela ny hetsika teo anelanelan'ny tanàna na tanàna dia nitaingina soavaly. Ny làlana izay nifanindry tamin'ireo namboarin'ny Romanina dia ratsy na tsy nisy. Ny fampiasana ny fiaran'ny kalesy sy ny làlana dia namboarina teo anelanelan'ny tanàna lehibe, nametraka tsipika fizarana anelanelan'ireo tanàna lehibe. Ny volavolan-tsoavaly no nahatanteraka ny fitarihana ireo fizotrany ireo.
Tany Paris dia nisy tambajotram-by notarihin'ny equines.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ireo tanàna izay nanana fitaterana renirano ireo dia nitana andraikitra lehibe ny soavaly. Ny biby dia nisintona ny entana tamin'ny alàlan'ny tady nanolo ny olona na ny ampondra izay nitarihana ireo entana ireo mandra-pahatongan'ny fisehon'ireo soavaly tratra.
Ny soavaly volavolan-dalàna dia nampiasaina ihany koa ho hery manosika hampiasana milina na fitaovana toy ny looma, fikosoham-bary, famatrarana, paompy, sns. Matetika ny biby dia niraikitra tamin'ny kofehy axis mitsangana amin'ny tsipika hazo fisaka namboarina. Ireo soavaly dia nalamina mba handeha anaty faribolana iray miaraka amin'ny hery ilaina hanatrarana ny hery takiana amin'ny fiasan'ny milina.
Amin'ny tany sarotra dia ny soavaly volavolan-tsoavaly no misintona hitarika ireo hazo.
Karazan-tsoavaly soavaly lehibe
Ankehitriny isika dia hahita ny sasany amin'ireo hazakazaka lehibe ao anatin'ny soavaly Draft. Saingy aloha isika hiresaka momba ny toetra mahazatra ananan'ireo mpitaingin-tsoavaly.
Toetra mampiavaka ny karazana soavaly volavolan-tsoavaly
Ny soavaly volavolan-dalàna dia malaza amin'ny azy tanjaka sy fiaretana lehibe. Izy ireo dia lehibe, lava, mitovy lehibe, na dia efa noresahintsika aza, miankina amin'ny karazana soavaly volavolan-tsoavaly, dia ho lehibe kokoa na kely. Izy ireo dia afaka miovaova amin'ny 160 cm ka hatramin'ny 180 cm amin'ny malazo ary eo anelanelan'ny 600 sy 1000 kg, na dia afaka mihoatra io lanja farany io aza ireo manana drafitra mavesatra.
Mahery sy lehibe ny taolan'ireto soavaly ireto. Ny fitomboan'ny volony. Ny mombamomba ny loha matetika dia fohy sy mifandona, ary fohy ny rantsam-batana.
Ny palitao dia mety miovaova arakaraka ny karazany resahina, na dia matetika aza manana palitao matevina kokoa. Ny karazana sasany, toy ny Percherons, dia rakotra volo ny kitrony.
Raha ny toetrany dia momba biby tony tokoa.
Ary ankehitriny eny, hiresaka momba ny karazany efatra amin'ireo equines ireo isika.
Izahay dia teo aloha iray amin'ireo karazan-tsoavaly tranainy indrindra. Ity karazany ity dia teraka tany Ardennes, Belzika, Luxenburg ary France, ny teo aloha no nahazoana ny anarany. Na izany aza, ny tantaran'ireto dia mitovy nanomboka tamin'ny lavitra lavitra ny tantara, mankany Roma taloha. Ny soavaly Ardennes na Ardennes no razamben'ny ankamaroan'ny volavolan-dalàna hafa.
Tany am-piandohana dia volom-borona soavaly izy ireo fa tsy sokajy mavesatra, fa tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nafangaro tamin'ny soavaly arabo ny karazany mba hanamaivana azy. Androany dia raisina ho toy ny soavaly volafotsy somary mavesatra.
dia tena zava-dehibe amin'ny fanatanterahana asa amin'ny ady, na amin'ny soavaly soavaly na amin'ny mpitaingin-tsoavaly mitaingina.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'io karazany io ianao dia afaka mahita vaovao ao amin'ny lahatsoratray: Ardennes Horses, iray amin'ireo karazan-trondro tranainy indrindra
Drafitra fanosotra amerikana
Ity karazana soavaly ity no hany soavaly volavolan-tsoavaly namboarina tany Etazonia misy ankehitriny. Izy io dia mahazo ny anarany avy amin'ny kapoaka volamena na crampagne ary maso amber.
Karazana karazany tsy dia misy dikany firy na dia atao aza ny asa mba tsy ho very.
Es iray amin'ireo karazana drafitra kely indrindra, farafaharatsiny afaka mahatratra 160 cm izy ireo. Ankoatry ny maha-matanjaka azy dia karazam-borona mavitrika izay ampiasaina ho soavaly fiompiana. Manana ny pompadour sy ny rambony izy.
Ao anatin'ity hazakazaka fiaretana lehibe ity, hitantsika ireo karazana soavaly telo karazana: ny letonianina mavesatra andraikitra, ny letonianina somary mavesatra asa ary ny maivana latvian.
Drafitra soavaly Belza
Avy any Belzika, izy io dia iray amin'ireo volavolan-dalàna efa be mpampiasa any Etazonia sy Kanada. Nampiasaina ambonin'ny zavatra rehetra izy io ho fitaterana entana be dia be.
Ity karazana ity dia avy amin'ny faritany mitovy anarana aminy. Ny fisafidianana ireo karazana zanatany any an-toerana dia azo. Karazan’olona maharitra ela izy io ary tsy mila sakafo firy velona. Androany dia tsy dia be loatra ny kopia.
Ity iray ity karazany avy amin'i Le Perche, any Frantsa, dia tsy vitan'ny hoe malaza ho azy fotsiny tanjaka lehibe sy tsy fivadihana fa noho ny toetrany mahafinaritra dia nankasitraka azy ireo ka napetrany tamin'ny lisitry ny soavaly tsara indrindra eto an-tany.
Niely tsikelikely io karazana io ary nitazona karazana isan-karazany arakaraka ny firenena nitohizany. Raha te hahalala ireo karazany isan-karazany ao anatin'io karazany io ianao, dia ampirisihinay hijery ny lahatsoratray: Soavaly percheron
Miatrika drafitra soavaly hafa avy any Frantsa izahay. Izy io dia karazany novolavolaina tao amin'ny Taonjato faha-XIX ary iza no manana a faharanitan-tsaina lehibe. Ny anarany dia avy amin'ny tendrombohitra Breton, izay nisy azy teo.
Izy io dia karazan-tsakafo iray, miaraka amin'ny dia an-tongotra haingana sy lalan-kaleha na eo aza ny habeny.
Ity karazana soavaly volom-borona ity dia vokatry ny ny fiampitana ny mares mavesatra Scottish sy soavaly Flemish. Nihatsara izany tamin'ny fiampitana niaraka tamin'i Shire sy Arabo. Izany rehetra izany no mahatonga ny karazany ho kanto kokoa.
Miaraka amin'ny mampiavaka ny soavaly arabo sy berber dia karazany lehibe sy lanjany (manodidina ny 850 kg) io. Volo izany be mpampiasa amin'ny asa fitarihana miadana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Volavolan-tsoavaly sy ireo karazana solontenany
Ny Soavaly Hackney sy ny toetrany avo lenta